Glimpse, forogo nyowani yeGimp yakagadzirwa nevasina kugutsikana vashandisi vezita rekuti "Gimp" | Linux Vakapindwa muropa
Pasina mubvunzo chimwe chezvakanakira software yemahara uye kuti chero munhu anowana kodhi yekodhi yezvishandiso nefilosofi iyi ndeyekuti chero munhu anogona kugadzirisa uye kugovera patsva kunyorera, kujekesa chero bedzi chikamu icho kodhi yekodhi inoenderera ichiwanikwa kune veruzhinji ichiremekedzwa.
Naizvozvi, nekufamba kwenguva, mafomu akamuka ari maforogo kana akatorwa kubva kune vamwe.Iyi ndiyo kesi yekuparadzirwa kweLinux, muenzaniso wakajeka watinawo ndeweUbuntu naDebian. Kunyangwe ndichisiya kugovera parutivi uye ndichitarisa zvakanyanya pachikamu chekushandisa, mazuva mashoma apfuura ndichivhura mumambure ndakasangana nenhau dzinonakidza uye iri iro boka revasina kugutsikana vanoita zvematongerwo enyika nemasangano asina kunaka akatorwa Kubva pane izwi rekuti "Gimp" akatanga hoko yeiyo grafiti mupepeti Gimp, iyo ichagadziriswa pasi pezita Glimpse.
Chinhu chinonakidza pamusoro peichi ndechekuti zvinoonekwa izvo forogo yakasikwa mushure memakore gumi nematatu eboka iri revamiriri vanoedza kugutsa vashanduri veGimp kuti vachinje zita ravo, uyo sezviri pachena akaramba kungoita saizvozvo.
Iyi kesi inokonzerwa neshoko gimp mune mamwe mapoka emagariro yezvizvarwa zveChirungu vatauri inoonekwa sekutuka uye zvakare ine chirevo chisina kunaka chakabatana neiyo BDSM subculture.
BDSM ishoko rakagadzirwa kusanganisa boka remabatiro akasununguka emitambo yekufungidzira uye fungidziro, idzo mune dzimwe nguva dzinoonekwa semararamiro. Ichi chidimbu chinobatanidza mavara ekutanga emazwi ekuti Bondage, Discipline, Domination, Submission, Sadism neMasochism.
Zvinoenderana nevatangi ve "Glimpse" (forogo yeGimp), shanduko yezita ichaita kuti chirongwa ichi chiwedzere kudiwa mumasangano edzidzo, maraibhurari eruzhinji uye nharaunda yemakambani. Semuenzaniso, mumwe wevashandisi anonongedzera kuti akamanikidzwa kutumidza nzira pfupi yeGIMP pakombuta kuti asawirirane nevamwe vake muBDSM.
Vadzidzisi vari kuyedza kushandisa GIMP mune yekudzidzisa maitiro vanoonawo matambudziko neasina kufanira kirasi mhinduro kune zita GIMP.
Vagadziri veGIMP havadi kuchinja zita uye ivo vanotenda kuti mukati memakore makumi maviri ekuvapo kweprojekti, zita rake rava kuzivikanwa kwazvo uye inosanganisirwa munzvimbo yekomputa ine graphical edhita (kana uchitsvaga muGoogle, zvinongedzo zvisina hukama neyekufananidza mupepeti zvinowanikwa kekutanga chete papeji 7 yemhedzisiro yekutsvaga)
Mumamiriro ezvinhu apo kushandiswa kwezita rekuti Gimp kunoratidzika kusingagamuchiriki, zvinokurudzirwa kushandisa zita rizere "GNU Image Manipulation Chirongwa" kana kugadzira maseti ane rimwe zita.
Parizvino, vatatu vanogadzira (bochecha, TrechNex, uye Nhengo1221), avo vasina kumbobvira vatora chikamu mukugadzirwa kweGIMP, vakapinda mukugadzirwa kweforogo.
Muchikamu chekutanga, chirongwa ichi chakamisikidzwa se «yekutanga forogo», ichitevera chikuru Gimp kodhi base.
MunaGunyana zvakarongwa kushambadza yekutanga vhezheni ye0.1, iyo inosiyana neGIMP 2.10.12 chete nekushandura zita uye rebrand. ZveLinux, zvakarongerwa kugadzirira magungano muFlatpak uye AppImage mafomati.
Nyaya dzeramangwana dzinotarisirwa kusanganisira zvinhu zvitsva zvine chekuita nekubviswa kweyakare -kare mazwi emushandisi, kunyanya ane chekuita neiyo graphical interface.
Kuburitswa uku kuchagadzirwa seforogo izere, kune izvo zvigadzirwa kubva pakati peiyo Gimp codebase inoendeswa nguva nenguva.
Yekutanga yakazara yakazara vhezheni inotarisirwa kuve Glimpse 1.0, iyo ichave yakavakirwa paGIMP 3.0 codebase, iyo yakashandurwa kuti ishandise raibhurari yeGTK3.
Paunenge uchigadzirira inotevera vhezheni yeGlimpse 2.0, ivo vanogadzira vanovavarira kugadzirisa zvachose chimiro uye kunyange kukurukura nezve mukana wekusarudza mumwe mutauro wechirongwa kuti unyore nyowani graphical interface (vanonyanya kunyorera ndiD uye Rust).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Glimpse, forogo nyowani yeGimp yakagadzirwa nevasina kugutsikana vashandisi vezita "Gimp"
Chaizvoizvo? ... Kutsamwa kukuru!
Handimbofi ndakatsigira forogo yakadaro, nharo dzeGimp dzinoita sedzinonzwisisika kwandiri.
Uye ini ndaifunga kuti dambudziko neiyo GImp raive risinganzwisisike bhuku, isinganzwisisike interface, uye kushomeka kwema Tutorials
Ini ndinobvuma, kunyangwe kuti muchikamu chedzidziso pane zvakawanda paYouTube, kunyangwe pamibvunzo yepamberi ini handizive nekuti ini handina kumbowana mukana wekushandisa Gimp zvakakwana.
Zvakanaka, chinyorwa hachishamisi, nekuti chinondiyeuchidza nezve chimwe chinhu chakafanana chakaitika gore rapfuura mukukonana kudiki, uko Richard stallman akakumbira vamwe vanogadzira kuti vachinje zita remamwe mapakeji ayo, kana ndikarangarira nemazvo, aive aDebian uye akafunga zvisina kufanira zita remapakeji aya.
Asi pakupedzisira kubva mumaonero angu inyaya yemutauro netsika.
Mahara zvinoreva benzi kumaodzanyemba kweSpain, asi hapana munhu akafunga zvekugadzira forogo nekuti chingave chinhu chinopenga.
Fucking gringos, muchiSpanish izvo hazviitike, hapana zano rekuti gimp yaireva kuita hupombwe nadhiyabhorosi, fucking gringos